Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshada shiida+Shiinaha-Shiinuhu
Hal-wadidda Kelida Cadaadiska Sare ee Roller Mill - Taxanaha PGM
Codsiga: Hal-wadidda Keliga ah ee Cadaadiska Sare ee Roller Mill - Taxanaha PGM waxaa si gaar ah loogu talagalay in horay loo shiido clinkers sibidhka, wasakhda macdanta, clinkers-ka birta iyo wixii la mid ah galka yar-yar, si loo burburiyo macdanta birta ah (macdanta birta, macdanta manganese, naxaasta). macdanaha macdanta ledh-zinc, macdanta vanadium iyo kuwa kale) iyo in lagu shiido macdanta aan biraha ahayn (gangues dhuxusha, feldspar, nepheline, dolomite, limestone, quartz, iwm.)
MQY Buux-dhaafka Nooca Mill
Codsiga:Mashiinka wax lagu shubo kubbadu waa nooc ka mid ah qalabka lagu shiido macdanta iyo agabka kale ee adag.Waxaa si weyn loo isticmaalaa in processing biraha non-ferrous iyo ferrous, kiimikooyinka, qalabka dhismaha iyo warshadaha kale sida qalabka ugu muhiimsan ee hawlgalka shiidi.
Codsiga:Warshada usha waxaa loogu magac daray jirka wax shiida ee ku raran dhululubada waa ul bir ah.Mashiinnada usha guud ahaan waxay isticmaashaa nooc qoyan oo qulqulaya waxaana loo isticmaali karaa sidii heer-koowaad warshad-wareeg-wareeg ah.Waxaa si weyn loogu isticmaalaa ciidda dhagaxa macmalka ah, dhirta dhaymada macdanta, warshadaha kiimikaad ee warshadaynta aasaasiga ah ee qaybta tamarta ee warshadda.
CS Series Magnetic desliming taangiga waa qalab kala soocida birlabeedka kaas oo kala saari kara macdanta magnetic iyo orega aan magnetic-ka ahayn (slurry) ee hoos yimaada ficilka cufisjiidka, xoogga magnetic iyo kor socodka qulqulka.Waxaa inta badan loo adeegsadaa ka faa'iidaysiga iyo warshadaha kale.Alaabta waxaa lagu hagaajiyay kombuyuutar, oo leh waxtar sare, isku halleyn wanaagsan, qaab-dhismeed macquul ah iyo hawlgal fudud.Waa qalab ku habboon kala-soocidda slurry.
Taxanaha HPGM Cadaadiska Sare ee Roll
Baaxadda Codsiga Waxqabadka:
1. Dhexdhexaad, ganaax iyo ultrafine shiidi alaabta badan.
2. Warshadaha wax soo saarka macdanta, waxa la dhigi karaa ka hor inta aan kubbadda lagu shubin, sida qalab horay loo shiiday, ama ka samaysan habka wax lagu shiidi karo oo la isku daray.
3. Warshadaha pellet oksaydhka, waxay bedeli karaan warshada qoyan ee caadi ahaan loo isticmaalo.
4. Qalabka dhismaha, qalabka dib-u-soo-celinta iyo warshadaha kale, ayaa si guul leh loogu dabaqay clinker sibidhka, limestone, bauxite iyo shiiditaan kale.